ओमिक्रोन भेरियन्ट कति खतरनाक, कस्ता लक्षण देखिन्छन् ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
ओमिक्रोन भेरियन्ट कति खतरनाक, कस्ता लक्षण देखिन्छन् ?
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनले भारत, श्रीलंकासहित ३५ ओटा देशमा फैलिसकेको छ । बिहीबार भारतमा ओमिक्रोनबाट संक्रमित एक व्यक्ति ६६ वर्ष र अर्को ४६ वर्षका दुई जनामा ओम्रिकोनको संक्रमण पुष्टि भयो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोन सम्पूर्ण विश्वका लागि ठूलो खतरा भएको बताएको छ । प्रारम्भिक डेटाले सुझाव दिन्छ कि ओमिक्रोनमा व्यक्तिलाई संक्रमित गर्ने क्षमता छ र यसले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई पनि ओझेलमा पार्न सक्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोन आरटी–पीसीआरलगायतको परीक्षणबाट पत्ता लगाउन सकिने बताएको छ । यसले यसलाई पत्ता लगाउन र फैलिनबाट रोक्न मद्दत गर्न सक्छ। यसका अन्य भेरियन्ट पत्ता लगाउनको लागि आनुवंशिक अनुक्रमहरूको साहारा लिन सकिन्छ । तर केही वैज्ञानिकहरूले यो त्यति सजिलो नभएको बताएका छन् ।
इन्डियन एक्सप्रेसमा वैज्ञानिकहरूले अधिकांश आरटीपीसीआर परीक्षणहरूले ओमिक्रोन र अन्य भेरियन्टहरूबीच फरक छुट्याउन सक्षम नभएको बताएका छन् ।
वैज्ञानिकहरू भन्छन् कि आरटीपीसीआर परीक्षणले मात्र व्यक्ति कोरोना संक्रमित छ वा छैन भनेर देखाउँछ, न कि भिन्नता। यस्तो अवस्थामा जीनोम सिक्वेन्सिङ अध्ययन आवश्यक हुन्छ। तर सबै संक्रमित नमूनाहरू जीनोम अनुक्रमका लागि पठाउन सकिँदैन। यो प्रक्रिया ढिलो, जटिल र महँगो छ। आरटीसीआर परीक्षणले शरीरमा भाइरसको उपस्थिति पत्ता लगाउँछ।
यस प्रश्नमा परीक्षणको विज्ञान बुझ्नेहरूको राय विभाजित छ। सार्वजनिक र निजी प्रयोगशालाहरूमा गरिएका अधिकांश परीक्षणहरूमा सार्स कोव–२को संक्रमण पत्ता लगाउन सकिन्छ। तर संक्रमित व्यक्ति कुन प्रकारको भाइरसबाट संक्रमित छन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।
किनभने यी परीक्षणहरू भाइरसको त्यो हिस्साको तलाशमा छ जसमा बढी बदलाव हुँदैन । भेरियन्ट म्युटेसन फरकको आधारमा निर्धारण गरिन्छ।
ओमिक्रोनको मामलामा, यो भिन्नता स्पाइक प्रोटीनको उत्परिवर्तनसँग जोडिएको छ । भाइरसको एक भाग हो कि ड्रग्स र प्रतिरक्षा कोशिकाहरूबाट आफूलाई जोगाउन बारम्बार परिवर्तन हुन्छ।
यस कारणले यो परीक्षण गर्न गाह्रो छ। यस्तो अवस्थामा, धेरैजसो परीक्षणहरूले त्यस्ता व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण भएको देखाउँछ, तर उनीहरूले ओमिक्रोन भेरियन्टबाट संक्रमित छन् भनेर बताउँदैनन्।
यसका लागि, डाक्टरले तपाईंको नमूना प्रयोगशालामा पठाउनु पर्छ जसले आनुवंशिक अनुक्रमणको मद्दतले ओमिक्रोन जस्ता जिनेटिक सिग्नेचरको तलाश गर्दछ ।
थर्मो फिशर साइन्टिफिक कम्पनीले एउटा परीक्षण ल्याएको थियो, जसले कोरोना संक्रमणको परीक्षण गर्न सक्छ र परीक्षणकर्ताहरूलाई उनीहरूले परीक्षण गरिरहेको नमूना ओमिक्रोन भेरियन्टबाट संक्रमित हुन सक्छ भनेर संकेत गर्न सक्छ।
यो परीक्षणले कोरोना भाइरसको तीन भागलाई लक्षित गरेको छ। यी दुई हिस्साहरू अपेक्षाकृत स्थिर छन्। त्यस्तै, एक हिस्सा परिवर्तन हुने स्पाइक प्रोटिन क्षेत्र हो ।
यस्तो अवस्थामा यदि व्यक्ति कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्टबाट संक्रमित भएमा पहिलो दुई भागको परीक्षण पोजेटिभ आउनेछ । कोरोना भाइरसको अल्फा भेरियन्टमा पनि यस्तै लक्षण देखिएको छ । तर यदि व्यक्ति ओमिक्रोनबाट संक्रमित छ भने, स्पाइक प्रोटीन क्षेत्रमा नकारात्मक पाइएको छ।
हाल, विश्वव्यापी संक्रमणका नयाँ केसहरू मध्ये ९९ प्रतिशत डेल्टा भेरियन्टसँग सम्बन्धित छन्। यो कमी डेल्टा भेरियन्टमा देखिँदैन। र थर्मो फिशर पीसीआर परीक्षणले तीनै क्षेत्रबाट सकारात्मक संकेत दिन्छ।
यस्तो अवस्थामा परीक्षणका क्रममा तीनवटै क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएमा डेल्टा भेरियन्ट हुने सम्भावना छ ।
भाइरसको यी नयाँ भेरियन्टहरू पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा फेला परेका थिए, त्यसपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई जानकारी दिइएको थियो। संगठनले त्यसपछि नोभेम्बर २४ मा दक्षिण अफ्रिकामा यो नयाँ संस्करण पुष्टि गर्यो र एक विज्ञप्ति जारी गर्यो।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गत हप्ता कोरोना भाइरसको यो नयाँ संस्करणलाई ‘चिन्ताको विषय’ भनेर नामाकरण गर्दै यसलाई ओमिक्रोन नाम दिएको थियो।
सङ्गठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस भेरियन्टमा धेरै म्युटेसन भएको र यसबाट पुनः सङ्क्रमण हुने खतरा रहेको प्रारम्भिक सङ्केत गरेको थियो ।
कोरोनाको यो नयाँ भेरियन्ट पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकी डाक्टर एन्जेलिक कोएत्जीले पत्ता लगाएका थिए । उनले बीबीसीलाई भने “कि अहिलेसम्म यी प्रकारहरू फेला परेका मानिसहरूमा कोविडको धेरै हल्का लक्षणहरू देखिएका छन्।”
उनले भनिन्, “धेरैजसो बिरामीले शरीर दुख्ने र अत्याधिक थकान महसुस गरेको गुनासो गरिरहेका छन्। म युवाको कुरा गर्दैछु। अस्पतालमा भर्ना भएकाहरूको कुरा होइन।”
यद्यपि, डा कोएत्जीले उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूमा यस प्रकारको प्रभावको गम्भीरता अनुमान गर्न समय लाग्ने पनि बताए।
सबै उत्परिवर्तनको मतलब ती खराब छन् भन्ने होइन, तर यसमा के उत्परिवर्तन भएको छ भनेर हेर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
तर, चिन्ताको विषय यो छ कि यो भाइरस चीनको वुहानमा पाइने मूल भाइरसभन्दा मौलिक रूपमा फरक छ। यसको मतलब त्यो मूल भाइरसलाई ध्यानमा राखेर बनाइएका खोपहरू पनि यस भेरियन्टका लागि प्रभावहीन हुन सक्छन्।
केही उत्परिवर्तनहरू अन्य भेरियन्टहरूमा पनि देखिएका छन्, जसले यस संस्करणमा उनीहरूको भूमिकाको बारेमा केही जानकारी प्रदान गर्न सक्छ। जस्तै एन ५०१ वाई कोरोना भाइरस फैलाउन सजिलो बनाउँछ।
त्यहाँ केही उत्परिवर्तनहरू छन् जसले एन्टिबडीलाई भाइरस पहिचान गर्न गाह्रो बनाउँछ र यसले खोपको प्रभावकारिता घटाउँछ। केही उत्परिवर्तन पूर्ण रूपमा फरक छन्।
दक्षिण अफ्रिकाको क्वाजुलु–नताल विश्वविद्यालयका प्रोफेसर रिचर्ड लेसेल्स भन्छन्, ‘यसले मानिसबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भाइरसको क्षमता बढाउन सक्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो।”
भेरिएन्टका उदाहरणहरू पनि छन् जुन कागजमा डरलाग्दो देखिन्थ्यो तर धेरै प्रभाव पारेन। वर्षको सुरुमा, बिटा भेरियन्ट चिन्ताको कारण बन्यो किनभने यो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बेवास्ता गर्नमा बढी माहिर थियो।
तर पछि डेल्टा भेरियन्ट संसारभर फैलियो र धेरै समस्या निम्त्यायो। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्रोफेसर रवि गुप्ता भन्छन्, “बिटाले प्रतिरक्षा प्रणालीबाट बच्न सक्छ, डेल्टा भेरियन्टमा संक्रामकता थियो र प्रतिरक्षा प्रणालीबाट बच्ने क्षमता कम थियो।” – विविसी हिन्दीको सहयोगमा
अब लकडाउन होला कि भनेर नआत्तिहालौंः मन्त्री खतिवडा
सुटकेसभित्रबाट चोर समातिएपछि…
धराने टोलीको तमोरमा रयाफ्टिङ मज्जा